Imithetho yedolophu noMgaqo-siseko - uMbutho waMaziko aBhala amaZwe ngamaZwe
Imithetho yoMbutho iyafumaneka ngokunqakraza Ii-Bylaws zoMbutho wamaZwe aBhalayo.
UMgaqo-siseko woMbutho uyafumaneka ngokucofa ku UMgaqo-siseko woMbutho wamaZiko okuBhala eHlabathi.
Julayi 1, 2013
Inqaku loku-XNUMX: Igama kunye neNjongo
Icandelo 1: Igama lombutho liya kuba nguMbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi, emva koku obizwa ngokuba yi-IWCA.
Icandelo 2: Njengendibano yeBhunga leSizwe lesiNgesi lesiNgesi (i-NCTE), i-IWCA iyayixhasa kwaye iyayikhuthaza imfundo kunye nophuhliso lobungcali kumaziko okubhala ngezi ndlela zilandelayo: 1) ukuxhasa iminyhadala neenkomfa; 2) phambili isifundi kunye nophando; 3) ukuphucula imeko yobungcali yamaziko okubhala.
Isiqendu II: Ubulungu
Icandelo 1: Ubulungu buvulelekile kuye nawuphina umntu ohlawula amatyala.
Icandelo 2: Ulwakhiwo lwentlawulo luya kuchazwa kwimithetho yedolophu.
Isiqendu III: Ulawulo: Amagosa
Icandelo 1: Amagosa aya kuba nguMongameli odlulileyo, uMongameli, uSekela Mongameli (oza kuba nguMongameli kunye noMongameli odlulileyo kwiminyaka emithandathu elandelelanayo), uNondyebo kunye noNobhala.
Icandelo 2: Amagosa aya kunyulwa njengoko kuchaziwe kwiNqaku VIII.
ICandelo 3: Imiqathango yeofisi iya kuqala ngoko nangoko emva kweNgqungquthela yoNyaka ye-NCTE elandela unyulo, ngaphandle kokuba ixesha ligcwalisa isithuba (jonga kwiNqaku VIII).
ICandelo 4: Amathuba okuba ngusekela-Mongameli-njengoMongameli owalandela isikhundla iya kuba yiminyaka emibini kwi-ofisi nganye, ayinakuphinda ihlaziywe.
Icandelo lesi-5: Imiqathango ye-ofisi kaNobhala kunye noNondyebo iya kuba yiminyaka emibini, ivuseleleke.
Icandelo 6: Amagosa kufuneka agcine ubulungu be-IWCA kunye ne-NCTE ngexesha le-ofisi.
Icandelo 7: Imisebenzi yawo onke amaGosa iya kuba yileyo ibekwe kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo le-8: IGosa elonyuliweyo lingasuswa eofisini ngesizathu esifanelekileyo ngokuvumelana ngamxhelo-mnye ngamanye amaGosa kunye nesibini kwisithathu sevoti yeBhodi.
Isiqendu IV: Ulawulo: iBhodi
ICandelo 1: IBhodi iya kuqinisekisa ngobume obubanzi bobulungu ngokubandakanya abameli bommandla, ubukhulu becala kunye nabazimeleyo. Abameli bommandla bayonyulwa (jonga kwiCandelo 3); KwiNdawo eNkulu neKhethekileyo yaBameli banyulwa njengoko kuchaziwe kwiMithetho kaMasipala.
ICandelo 2: Amalungu ebhodi yeBhodi ekhethiweyo aya kuba yiminyaka emibini, evuseleleka. Imiqathango iya kugxothwa; ukumisela ukugxadazela, ubude bexesha bunokuhlengahlengiswa okwethutyana njengoko kuchaziwe kwimithetho yedolophu.
Icandelo lesi-3: Abaphathi bommandla banelungelo lokuchonga iBhodi ukuba bamele ummeli abe mnye kwingingqi yabo.
Icandelo 4: UMongameli uyakonyula amalungu eBhodi angavotiyo kwimibutho encedisayo njengoko kuchaziwe kwimithetho yedolophu.
Icandelo 5: Amalungu eBhodi kufuneka agcine ubulungu be-IWCA ngexesha le-ofisi.
Icandelo 6: Imisebenzi yawo onke amalungu eBhodi, anyuliweyo okanye amiselweyo, ibekiwe kwiMithetho kaMasipala.
ICandelo 7: Ilungu leBhodi elonyuliweyo okanye elonyuliweyo lingasuswa e-ofisini ngesizathu esivakalayo ngengcebiso yamaGosa kunye nesibini kwisithathu sevoti yeBhodi.
Inqaku V: Ulawulo: IiKomiti kunye namaQela aSebenzayo
Icandelo 1: Iikomiti ezisisigxina ziya kubizwa ngemithetho yedolophu.
Icandelo 2: Iikomitana, amaqela asebenzayo, kunye namanye amaqela asebenzayo aya kugunyaziswa nguMongameli, amiselwe kwaye ahlawuliswe ngamaGosa.
Inqaku VI: Iintlanganiso kunye neMisitho
Icandelo 1: Phantsi kobunkokheli beKomiti yeeNkomfa, i-IWCA izakuhlala ixhasa ngemali imisitho yophuhliso lobungcali njengoko kuchaziwe kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 2: Abaphathi bemisitho bayakungqinwa yiBhodi ze bakhethwe ngokweenkqubo ezichazwe kwimithetho yedolophu; Ubudlelwane phakathi kwemikhosi kunye ne-IWCA buya kuchazwa kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 3: Intlanganiso kawonke-wonke yobulungu iya kubanjwa kwiinkomfa ze-IWCA. Ngokubanzi kangangoko kunokwenzeka, i-IWCA iya kubamba iintlanganiso ezivulekileyo kwiCCCC nakwiNCTE. Ezinye iintlanganiso ngokubanzi zinokubanjwa ngokokubona kweBhodi.
Icandelo 4: IBhodi iya kudibana kabini ngenyanga ukuba kunokwenzeka kodwa kungabikho ngaphantsi kwesibini ngonyaka; Ikhoram iya kuchazwa njengesininzi samalungu eBhodi, kubandakanya amaGosa amathathu ubuncinci.
Inqaku VII: Ukuvota
Icandelo 1: Onke amalungu anelungelo lokuvotela amaGosa, amalungu eBhodi anyuliweyo, kunye nezilungiso zomgaqo-siseko. Ngaphandle kokuba kuchazwe kwenye indawo kuMgaqo-siseko okanye kwiMithetho kaMasipala, uninzi olulula lweevoti ezisemthethweni ziya kufunwa ukuze kwenziwe isenzo.
Icandelo 2: Inkqubo yokuvota iya kuchazwa kwimithetho yedolophu.
Inqaku VIII: Unyulo, unyulo kunye nezithuba
Icandelo 1: UNobhala uya kubiza amagama abatyunjiweyo; abagqatswa banokuzityumba ngokwabo, okanye naliphi na ilungu linokutyumba elinye ilungu elivuma ukutyunjwa. Kuya kwenziwa iinzame zokuqinisekisa ukuba abavoti banokukhetha ubuncinci kubagqatswa abathathu kuso nasiphi na isikhundla.
Icandelo 2: Ukulungela, abagqatswa kufuneka babe ngamalungu e-IWCA anokuma okuhle.
Icandelo 3: Ithayimthebhile yonyulo iya kuchazwa kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 4: Ukuba i-ofisi kaMongameli ayinamntu ngaphambi kwexesha, uMongameli odlulileyo uyakuyigcwalisa indima kude kube lunyulo lonyaka olulandelayo xa kungonyulwa uSekela Mongameli omtsha. Kutshintsho lwamagosa lonyaka, uSekela Mongameli ohleliyo uya kuthatha i-Ofisi kaMongameli, kwaye uMongameli odlulileyo uya kugqibezela uMongameli wangaphambili okanye i-ofisi ayiyi kuvalwa (bona iCandelo lesi-5).
Icandelo 5: Ukuba naliphi na elinye iGosa liza kungenamntu phambi kwexesha, amaGosa aseleyo aya kwenza ukuqeshwa okwethutyana de kube lunyulo lonyaka olulandelayo.
Icandelo 6: Ukuba izikhundla zabameli bengingqi ziye zingabinamntu phambi kwexesha, umongameli wengingqi esebenzisana nayo uya kucelwa ukuba onyule ummeli omtsha.
Inqaku IX: Imibutho yamaZiko aBhalayo aManyeneyo aManyeneyo
Icandelo 1: IWCA yamkela njengamalungu ayo imibutho yamaziko okubhala engingqi adweliswe kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 2: Amanyeneyo anokulahla ubulungu bawo nangaliphi na ixesha.
Icandelo 3: Imimandla emitsha efake isicelo sobume bokumanyana ivunywa sisininzi sevoti yeBhodi; Inkqubo yokwenza isicelo kunye neenqobo zokugweba zichaziwe kwimithetho yedolophu.
Icandelo 4: Onke amashishini amanyeneyo anelungelo lokuchonga iBhodi abe ngummeli omnye ovela kwingingqi yabo.
Icandelo 5: Iingingqi ezimi kakuhle ezibonisa isidingo zinokufaka isicelo kwi-IWCA yezibonelelo okanye enye inkxaso yemisebenzi yengingqi njengoko ichaziwe kwiMithetho kaMasipala.
Inqaku X: Ushicilelo
Icandelo 1: Ijenali yeZiko lokuBhala lupapasho olusemthethweni lwe-IWCA; Iqela labahleli likhethwa kwaye lisebenze neBhodi ngokweenkqubo ezichazwe kwimithetho yedolophu.
Icandelo 2: I Incwadana yeLebhu yokuBhala lupapasho oludibeneyo lwe-IWCA; Iqela labahleli lisebenza neBhodi ngokweenkqubo ezichazwe kwiMithetho kaMasipala.
Inqaku XI: Izimali kunye noBudlelwane bezeMali
Icandelo 1: Eyona mithombo iphambili yengeniso ibandakanya intlawulo yobulungu kunye nengeniso evela kwiminyhadala exhaswe yi-IWCA njengoko kuchaziwe kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 2: Onke amagosa agunyazisiwe ukuba atyikitye izivumelwano zezemali kwaye abuyisele iindleko egameni lombutho ngokwemiqathango ebekwe kwiMithetho kaMasipala.
Icandelo 3: Yonke ingeniso nenkcitho ziya kuthathelwa ingqalelo kwaye zixelwe nguNondyebo ngokuthobela yonke imimiselo ye-IRS echaphazela imeko yokungenzi nzuzo.
Icandelo 4: Ukuba umbutho uthe wachitha, amaGosa aya kongamela ukuhanjiswa kweeasethi ngokuhambelana nemigaqo ye-IRS (jonga inqaku XIII, Icandelo 5).
Inqaku XII: UMgaqo-siseko kunye nemithetho yedolophu
Icandelo 1: IWCA iyakwamkela kwaye igcine uMgaqo-siseko ocacisa imigaqo-nkqubo yombutho kunye neseti yeMithetho kaMasipala echaza iinkqubo zokuphunyezwa.
Icandelo 2: Izilungiso kuMgaqo-siseko okanye kwiMithetho kaMasipala inokuphakanyiswa yiBhodi); 1) ngesibini esithathwini ivoti yamalungu aya kwiNtlanganiso kaWonkewonke ye-IWCA; okanye 2) ngamaxwebhu ezikhalazo atyikitywe ngamalungu angamashumi amabini aza athunyelwa kuMongameli.
Icandelo 3: Utshintsho kuMgaqo-siseko lwenziwa kwisininzi sesibini kwisithathu seevoti ezisemthethweni ezifakwe lilungu.
Icandelo 4: Ukwamkelwa nokutshintshwa kwemithetho yedolophu kumiselwa kwivoti yesibini kwisithathu seBhodi.
Icandelo 5: Inkqubo yokuvota icacisiwe kwiNqaku VII.
Inqaku XIII: Imigaqo ye-IRS yokuGcina imeko yokuKhululwa kwirhafu
I-IWCA kunye namacandelo ayo aya kuthobela iimfuno zokuxolelwa njengoMbutho ochazwe kwicandelo 501 (c) (3) loMgaqo wangaphakathi weRhafu:
Icandelo 1: Umbutho othe ngqo ulungelelaniswe ngokukodwa ngenxa yesisa, inkolo, imfundo, okanye iinjongo zesayensi, kubandakanya, ngeenjongo ezinjalo, ukwabiwa kwemibutho efanelekile phantsi kwecandelo 501 (c) (3) yeKhowudi yeNgeniso yangaphakathi, okanye icandelo elihambelana nayo nayiphi na ikhowudi yerhafu yomthetho.
ICandelo lesi-2: Akukho nxalenye yomvuzo kwiqumrhu oya kuthi usebenze ukuze uncede, okanye usasazwe kumalungu awo, abaphathiswa, amagosa, okanye abanye abantu babucala, ngaphandle kokuba imibutho iya kugunyaziswa kwaye inikwe amandla okuhlawula ngokufanelekileyo iinkonzo kwenziwe intlawulo nokwabiwa ukuqhubela phambili iinjongo ezichazwe kwicandelo 1 apha nakwinqaku __1__ lalo mgaqo-siseko.
ICandelo lesi-3: Akukho nxalenye ibalulekileyo yemisebenzi yombutho eyakuthi iqhubeke nokusasaza iindaba ezingasasazekiyo, okanye kungenjalo ukuzama ukuphembelela umthetho, kwaye umbutho awuyi kuthatha inxaxheba, okanye ungenelele (kubandakanya ukupapasha okanye ukuhambisa iingxelo) naliphi na iphulo lezopolitiko. egameni okanye ngokuchaseneyo nomgqatswa wesikhundla sikarhulumente.
Icandelo 4: Ngaphandle kwalo naliphi na elinye ilungiselelo lala manqaku, umbutho awuyi kuqhubeka neminye imisebenzi engavumelekanga ukuba yenziwe (a) ngumbutho okhululwe kwirhafu yengeniso yomthetho phantsi kwecandelo 501 (c) (3) leNgeniso yangaphakathi Ikhowudi, okanye icandelo elihambelana nayo nayiphi na ikhowudi yerhafu yomthetho, okanye (b) ngumbutho, imirhumo etsalwa phantsi kwecandelo 170 (c) (2) yeKhowudi yeNgeniso yangaphakathi, okanye icandelo elihambelana nayo nayiphi na irhafu ikhowudi.
Icandelo 5: Ekuchithweni kombutho, iiasethi ziya kwabiwa ngenjongo enye okanye ezingaphezulu zokuxolelwa ngokwentsingiselo yecandelo 501 (c) (3) yeKhowudi yeNgeniso yangaphakathi, okanye icandelo elihambelanayo layo nayiphi na ikhowudi yerhafu yombuso, okanye ziya kusiwa kurhulumente womdibaniso, okanye kurhulumente okanye kurhulumente wasekhaya, ngenjongo zoluntu. Naziphi na ii-asethi ezingalahlwanga njalo ziya kulahlwa yiNkundla yamaGunya aLungeleyo yommandla apho ikhoyo iofisi eyintloko yombutho, ngokukodwa ezo njongo okanye loo mbutho okanye imibutho, njengoko inkundla iya kuthi, zicwangcisiwe kwaye zisebenza ngokukodwa ngenxa yezo njongo.